फेरी आन्दोलन गर्ने उद्घोष – All top Here
मोटरसाइकल सवार १८ वर्षीय सुदीप को ज्यान गयो दिवेश घाइते
सशस्त्र प्रहरी जवान मृत अवस्थामा फेला
टिपरको ठक्करबाट शिवाकोटी को मृत्यु
भर्खरै आयो दु:खद खबर : विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना
ढल्यो लोक दोहोरीकाे एउटा बलियो खम्बा,
आमा म भोली आउँछु’ भनेर फोन गरेका भण्डारी बास्कोटाको घरमा मृ’त भेटिए
दुबई प्रहरीमा जाने तयारीमा रहेका तीर्थको मृत्यु
दु:खद खबर : दुर्घटना टेकमाया र उनका नाबालक छोराको निधन
दु:खद : दु’र्घ’ट’ना दुई जनाको मृ’त्यु ।थप सात जना घा’इ’ते
ससुराली आएका ज्वाइँले लगाए ससुराली घरमा आगो। कारण अचम्म्को
Home/समाचार/फेरी आन्दोलन गर्ने उद्घोष
फेरी आन्दोलन गर्ने उद्घोष
adminOctober 21, 2019
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरी एक पटक आन्दोलन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन । मुलुकमा समाजवाद स्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने ईच्छा रहेको उद्घोष गरेका छन ।
विहिबार गृह जिल्ला चितवनमा चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने,‘फेरि एकचोटी राष्ट्र, जनताको हितमा समर्पित भएर अब काम गर्छु भनेर दह्रोसँग संकल्प लियौं भने सकिन्छ।
समाजवादको उदेश्य पूरा गर्न र पार्टीलाई कम्युनिष्ट जस्तो बनाउन आन्दोलन गर्ने इच्छा रहेको बताएका छन । उनले भने, ‘यो महान उद्देश्यमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। हामी जित्छौं पनि। प्रतिक्रान्ति यसरी रोकिन्छ भनेर उदाहरण दिन पनि सक्छौं।’
आफ्नै पार्टीमा नराम्रो रोगको सुरुवात भएको भन्दै बेलैमा विचार नगरे त्यसले पार्टी सिद्धाउन बेर नलाग्ने उनले दावी गरे । हामीले निर्णय एउटा गर्ने, भोट अर्कोलाई हाल्ने रोग चितवनबाटै सुरु भएको छ, उनले भने, पार्टीलाई ग्याष्ट्रिक, अल्सर रोग लागिसक्यो। बेलैमा उपचार गरे निको हुन्छ, नत्र खतरा छ।
कोरोनालाई पराजित गर्दै चीन नेपाललाई कोरोना भाइ* रसको औषधी, दिन तयार
कोरोनाका कारण हाम्रो देश भन्दा नेपालमै सुरक्षित् छ भन्दै आफ्नै देश फर्किन मानेनन् बिदेशी पर्यटक !
जित पछि यसो भनिन् विद्या भट्टराईले …
देवघाटमा अन्त्येष्टि गर्न लाग्दा शिशुले श्वास फेरेपछि ….
जनकपुर बाट काठमाडौं आउँदै गरेको बसलाई शँका लागेर चेक गर्दा तिन छक पर्यो प्रहरी..